Mikisaka koa ireo elefanta dia ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Amin'ny fifindramoniny, ampiasain'ireo tigra sy elefanta ny lalantsara anaty ala
Voadika ny 23 Jona 2021 5:32 GMT
Elefanta ao amin'ny valanjavaboarim-pirenena ao Bardiya, any Nepal. Sary an'i Salik Ram Chaudhary ho an'ny Nepali Times, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ity lahatsoratra ity, nosoratan'i Salik Ram Chaudhary, mpitantsoratry ny kaomity “Khata Wildlife Corridor Homestay Management” , dia nivoaka voalohany tao amin'ny Nepali Times ary dika nokiraina no averina avoaka eo amin'ny Global Voices ho toy ny ampahany amin'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
Isantaona dia an-jatony maro ireo elefanta mifindra monina avy any India mankany Nepal manavatsava ireo lalantsara samihafa. Na miaina anaty andiany vitsy aza ireo elefanta zanatany ao Nepal, inoana fa ireny elefanta mpifindra monina ireny dia tena zavadehibe ho fitazonana ny fahasamihafana. Tamin'ity taona ity, noho ny tsy fisian'ny fivezivezen'ny olombelona loatra vokatr'ireo fepetra nentin'ny valanaretiona COVID-19, niala tamin'ny làlana nahazatra falehany rehefa mifindra monina ireo elefanta, nandeha nanitsy namakivaky ireo faritra fonenan'ny olombelona.
Amin'ny fotoana tahaka izao isantaona, talohan'ny COVID-19 sy ny fihibohana, mitondra mpizahatany manodidina ny Valanjavaboarim-pirenena Bardiya ao afovoany-andrefan'i Nepal aho. Nefa, ilay valanaretina dia nidika hoe tsy nisy olona tany amin'ireo fianakaviana mpandray vahiny nanerana ny Khata Wildlife Corridor izay mifandray amin'ireo faritra misy fiainana anaty ala ao India sy Nepal. Raha atao hoe very fidirambola noho ny tsy fisian'ny zahavoary (ecotourism) ireo mponina tao an-toerana, ny tsy fisian'ny olona nandritra ny fihibohana dia midika fa niverina naka ny habak'izy ireo ny bibidia.
Mandray anjara amin'ny kaomity Khata Wildlife Corridor Homestay Management aho, izay midika fa zatra mikarakara ‘safari’ any anaty ala mikitroka sy manao fitsangantsanganana anaty ala, mampiseho amin'ireo mpivahiny izay rehetra azon'i Bardiya atolotra. Saingy tsy asa fotsiny io ho ahy—hatramin'ny fahazazako aho no efa mizotra amin'ireny ala manakaiky ny toeram-ponenako ireny ary tena mirotsaka amim-kafanampo tokoa aho amin'ny fitahirizana ny natiora. Na nisy aza ireo fepetra momba ny fivahinianana ary ny hafanana ningaingaina teny amin'ireo lemaka tao andrefan'i Nepal mialoha ny rivotra mitondra orana, tsy vitako ny nifehy tena hijanona an-trano.
Ny 10 Jona, tena an-dàlana ho any an'ala aho no nahita andiana elefanta 40 eo ho eo, misy zanany kely ka hatramin'ireo lehibe, mikisaka tsy lavitra fa antsasaka kilaometatra eo ho eo miala ny vohitra. Tsy ampy ny hilaza fotsiny hoe zavamahagaga tsy fahita izany; tena faran'izay tsy fahita ny andiana elefanta maro tahaka izany mandeha tena akaikin'ny toerana fonenan'ny olombelona—tsy fahita firy tahaka ny nahitàna ireo andiany naraha-maso akaiky nikisaka namakivaky ny faritanin'i Yunnan tao Shina.
Raha ny mahazatra dia mifindra monina manivaka ao anatin'ny Alan'ny Vondrompiarahamonina Shiva ao amin'ny faripiadidiana Madhuban manakaiky ny sisintany iraisana amin'i India ireo elefanta ao Bardiya mankany amin'ny Katerniaghat Wildlife Sanctuary ao amin'ny fanjakana indiàna Uttar Pradesh rehefa Septambra sy Oktôbra, ary miverina ao Nepal rehefa mankaiky ny fotoanan'ny orana. Fifindramonina an'arivo taonany nataon'ireo razamben'ireto andiany goavana ireto no nametraka io firindràna io.
Ary na ity andiany ity aza no lehibe indrindra hitako hatreto, dia efa somary mahazatra ihany ny mahita andiany kelikely amin'ireo elefanta ao anaty alan'ny vondrompiarahamonina Shiva.
Tamin'ity taona ity, angamba noho ny hetsiky ny olona tsy dia nisy loatra vokatr'ireo fepetra nandritra ny COVID-19, tsy nisahirana hijanona anatin'ilay lalantsara anaty ala ilay andiany nandritra ny fifindramonina isantaona fanaony, fa tonga dia nandeha nanitsy teo am-bohitra.
Narahako nandritra ny fotoana vitsivitsy teny amin'ireo arabe tao an-tanàna ireo elefanta, no sady naka sary sy lahatsary maro aho teny an-dàlana. Nientanentana ery aho, tsy nisy fotoana nananako tahotra. Mety hasiaka ireny andiany ambany fifehezan'ny reniny ireny raha mahatsiaro hoe tandindonin-doza ireo taranany.
Nitety namaky ny arabe sy ireo lemaka ilay andiany, mijanona rehefa hiraoka sakafo alohan'ny handalovany am-pilaminana anoloan'ireo toerena fiompiana. Raha sanatria nisy ny tsy fahampian'ny sakafo dia nety niditra tany anatin'ny tanin-katsaka izy ireny.
Sary an'i Salik Ram Chaudhary ho an'ny Nepali Times, nahazoana alàlana ny fampiasàna azy .
Nalefako ao amin'ny Facebook daholo ireo sary ny lahatsary nalaiko, nodoniko ireo namako mba hahafahako mizara amin'ny rehetra ireny biby ireny sy ny zavatra niainako.
Kanefa tsy ireo elefanta irery ihany no tombony azoko nandritra ny fandinihako ny fiainana anaty ala tao anatin'ireo roa herinandro ireo. Ny 28 May, nifanojo tamina tigra iray aho, 400 metatra teo am-pivoahana ny vohitra. Tsy dia mahazatra loatra io ary dia notandremako fatratra ny làlan'ny rivotra ka teny lavitra teny aho no nanara-maso ilay tigra, no sady naka sary azy. Fantatr'ilay tigra ny fisiako teo saingy tsy noraharahiany aho; fihavanana tanatin'ny tontolo ny anay roa tonta.
Nanaraka an'ilay tigra aho hatreny amin'ny toerana iray fisotroana rano ao amin'ilay faritra manasaraka ny Bardiya National Park, antsasaka kilaometatra miala ny Vohitra mpampiantrano vahiny ao Dalla izay naorinay niaraka tamin'ny fanampian'ny World Wildlife Fund (WWF) Nepal, folo taona lasa izay. Nisotro rano betsaka izy, nanandratra ny lohany, nijery ny manodidina azy, ary avy eo niverina nisotro indray.
Na dia mpitsongo dia any an'ala sy mpitaridia aza aho, tsy mbola nahita tigra akaiky be tahaka izany hatrizay. Raha ny marina, tena indraindray tadiavina ianao vao mahita itony sakadia kaodikaody itony. Nangovitra aho vokatry ny tena fientanentanana lalina sy ny hafaliana nahazo ity fotoana ity.
Mandritra ireo lohataona mamay, manomboka miha-ritra ireo loharano ao anatin'ny Valanjavaboarim-Pirenena ao Bardiya izay mameno ireo lavaka voajanahary fisotroana rano ho an'ireo miaina anaty ala, manery ireo bibidia maro hankany an-drenirano na ireo rano mihandrona manakaiky ny tanàndehibe sy ireo vohitra. Ary satria mitombo ny isan'ireo bibidia noho ny fahombiazan'ny fitahirizana ataon'i Nepal, dia misy ihany koa ny fitomboan'ny fifaneraseran'ny biby sy ny olombelona.
Tsy nandao ny làlana nahazatra azy ireo elefanta sy tigra nifanena tamiko nandritra ireo roa herinandro ireo, na hoe very làlana. Fa matoa nisy ny fanakaikezany ny toeram-ponenan'ny olombelona dia noho ny asa nilofosana am-polotaonany sy ireo ezaka fitahirizana nataon'ny vondrompiarahamonina, ny governemanta eny an-toerana ary ireo vondrona mpitahiry.
Noho io fahombiazana io, lasa zavatra fahita matetika ny fijerena bibidia, izay ahafahantsika mizara ireny biby ireny amin'ireo vahiny mampiasa ny tolotra fampiantranoana omenay rehefa tapitra ny fihibohana.
Ary, satria ao Bardiya, ilaintsika ny manamafy ireo ezaka fitahirizana manerana an'i Nepal mba hahafahantsika misitraka fihibohana anaty fitoniana ka hianarana mizara habaka sy miaina manakaiky ny fahamaroam-piainana midadasika sy manankarena ao Nepal.